Ihe mkpuchi igwe na-emebi ụgbọ ala gị? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Ugbo ala ụgbọ ala - ngwọta nwere ike
Ihe mkpuchi igwe na-emebi ụgbọ ala gị?
Akpati-ndokwasaigwe kwụ otu ebenwee ikike kasịnụ ime ihemmebikaụgbọ ala gị. Typedịigwe kwụ otu ebenọ ọdụ megideụgbọ alaagba na eriri na nsọtụ akpati. Ebe ọ bụ na ụdị aogbena-akpọtụrụ ya mgbe niileụgbọ ala gị, ọ nwere ike ịpị ya ma mee ka ọkọ.
Chọrọ ibufe ịnyịnya ígwè gị ma ọ bụ ịnyịnya ígwè gị n'ụgbọ ala mana ị nweghị akwa mkpuchi ụlọ ma ọ bụ na ị gaghị achọ iji akwa mkpuchi ụlọ. N'isiokwu a, m ga-egosi gị otu esi agbago igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe n'ụgbọala, m ga-enyekwa gị ụfọdụ ndụmọdụ ma ọ bụrụ na ịnwe ụgbọ ala pere mpe kachasị mma iji mee ka ọ dabara yana yana ụfọdụ ndụmọdụ otu ị ga-esi nweta igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ nke gị. t emebi ụgbọ ala mgbe ị na-eme ya. Mana tupu m mee, ọ bụrụ na ịchọrọ ndụmọdụ ndị ọzọ gbasara ịgba ịnyịnya ígwè, ịnwere ike ịkwado GCN site na ịpị Idenye aha na akara ngosi mgbịrịgba ahụ. (Booming Music) Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ n'ime gị ga-amata otu esi eme nke a.
Ọ bụrụ na i nwebeghị, ma ọ bụ na ịmaghi ma ọ bụrụ na ị na-emebi igwe kwụ otu ebe, isiokwu a ga - enyere aka. Ọ bụrụ na ị nwere nnukwu ụgbọ ala, dị ka ụgbọ ala ọdụ ma ọ bụ ụgbọ ala ọdụ ma ọ bụrụ na ị bụ onye America mgbe ahụ i nwere ike Ọ dị mfe. N'ihi na ihe ị nwere ike ime n'ozuzu ya bụ ịkwanye igwe kwụ otu ebe n'ozuzu ya ma ọ bụrụ na ị daa n'oche azụ.
Otu ihe bụ ijide n’aka na ị na-etinye igwe kwụ otu ebe n’elu dị ka m na-eme; nke ahụ pụtara na gia ebe a anaghị ezu ike igwe kwụ otu ebe. Nke a nwere ike imebi ha. Ya mere, kpoo ya nke ọma.
Ma hụkwa na eriri igwe na agbụ anaghị ejide ya n'akụkụ ụgbọ ala ahụ, gbakwunyere na ọ bụ ezi echiche naanị ịnwe mpempe akwụkwọ ma ọ bụ akwa ochie ị nwere ike iji kpuchie igwe kwụ otu ebe, ọ dị mma maka nchekwa, mana ọ na-egbochi unyi ịnweta ebe ọzọ, oge ụfọdụ ị nwere ike ịchọrọ? Tinyekwa mpempe akwụkwọ n'okpuru igwe kwụ otu ebe. M n'ozuzu mgbe niile nwere a di na nwunye nke Ibé akwụkwọ na azụ nke ụgbọ ala m. (egwu obi ụtọ) ma ọ bụrụ na ịchọrọ iburu ihe ndị ọzọ n'ụgbọ ala gị, dịka.
spana nchara igwe
Agam egosi gi otu esi eme ya na azu nihi na odighi nfe iwepu ya. Ma ọ bụrụ na ị hapụ ụkwụ azụ ahụ, ọ na - enyere aka ichebe ma ọ bụrụ na ịnwere ohere maka azụ azụ ntakịrị ma na - egbochi agbụ ahụ ịdapụ. Ugbu a iji wepu ụkwụ ihu, ma ọ bụrụ na ịnwe ngwa ngwa dị ka igwe kwụ otu ebe a, ịnwere ike ịtọhapụ ngwa ngwa.
Ma tinyela igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ otu ebe n’ihi na nke a nwere ike ịkọ ya, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ na-amị amị mgbe ọ na-agba. Ya mere, tinye mpempe akwụkwọ ọzọ n'elu ma tinye igwe kwụ otu ebe na nke ahụ kwesịrị ịdị mma iji kpuchido ya. Ọ bụrụ na ị nwere igwe kwụ otu ebe nwere diski breeki dị ka nke a, iwepụ wiilị ahụ dị mfe.
Ma mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ibuli impeller. Agbanyeghị, ụfọdụ axles enweghị ụlọ na-akwụ ụgwọ na ha kama kama ha na-achọkarị igodo Allen, na-abụkarị 5 mils dị ka nke a. Mgbe ụfọdụ ọ na-abụ mils 6.
Na nke m, agara m ezumike mgbe m kpọpụsịrị ha ma hapụ ha n'elu ụlọ ụgbọ ala m. Ha anọghị ebe ahụ mgbe m ruru ebe ahụ. Ama m na ọ bụghị naanị m na-eme ụdị ihe a.
Ugh, ọ bụ ihe nzuzu idozi na oge ụfọdụ ọ pụtara na ịchọrọ rotor ọhụrụ. Debe ya mgbe niile na igwe rotor ma zere itinye ihe n'elu ya. Ndụmọdụ ọzọ ma ọ bụrụ na ị na-eji breeki diski arụ ọrụ bụ na ị kwesịrị itinye ihe na caliper mgbe ị na-ewepụ wiil ahụ.
Nke a bụ n'ihi na mgbe ị dọtara breeki lever enweghị rotor na caliper, nke a nwere ike ibute pistons a na-asọpụrụ ma pad ahụ mechie ibe ha. Nwere ike ịmanye ya imeghe emeghe, mana ọ bụ ntakịrị nsogbu. Yabụ ị nwere ike itinye plastik pụrụ iche, plọg plastik ndị ahụ pụrụ iche ị nwere ike ịzụta.
Ọ bụrụ na inwere oghere pere mpe, ịnwere ike wepu ụkwụ abụọ iji mee igwe kwụ otu ebe. Ma echegbula, nke ahụ abụghị nsogbu. Ọ ga-eju gị anya na oche na-agbadata ma na-ewepụ ụkwụ abụọ na igwe kwụ otu ebe, ụgbọ ala ole igwe nwere ike ịbanye.
Echere m, Renault Clios, Fiat 500, Porsche Caymans, ihe ọ bụla. Enwere ụgbọ ala ole na ole na-enweghị ike ịbanye igwe kwụ otu ebe mgbe ịchọrọ n'ezie. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịwepụ ụkwụ abụọ ahụ, ụzọ kachasị mfe iji mee nke a bụ ịgbanye igwe kwụ otu ebe.
Ọtụtụ ndị ọcha na-ewere nke a dịka arụ ma kpọọ echiche ịme ya ga-agwa gị ka ị ghara ime ya. Ma ha ezighi ezi. You nwere ike tinye mpempe akwụkwọ ka ọ ghara imebi igwe kwụ otu ebe ma debe ya nke ọma ma dị ọcha. (ọkụ dị egwu) Iji wepu wiil ahụ dị n’azụ, ọ kachasị mfe ma ọ bụrụ na itinye wheel azụ na obere gia na azụ.
Kpoo ngwa ngwa ngwa ngwa ma ọ bụ ngwa ngwa ngwa ngwa, dọpụta azụ azụ azụ na azụ wee hapụ wiil ahụ ka ọ daa. Bịarutere ebe ị gbakwunyere Plus, ọ dịkarịrị mfe itinye ụkwụ abụọ n’azụ igwe kwụ otu ebe ọbụlagodi na ọ bụ isi ala, yabụ mee otu ihe ahụ ọzọ, mana ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-aga ezumike ma ọ bụ ikekwe ị na-ebu ngwongwo niile gị n'azụ igwe kwụ otu ebe, mgbe ahụ, m ga-atụ aro itinye nke ahụ na mbụ wee kpụkọta igwe kwụ otu ebe n'elu, ọkachasị ihe ndị dị arọ karị.
Fanye nke a na mbu. Ihe kpatara ya bụ na ọ dị mfe azọpịa igwe kwụ otu ebe gị na dịka anyị kwurula na mbụ, ebe ndị ahụ dị mfe ịgbagọ nwere ike imebi igwe eji agbaji diski na azụ mech hanger. Dị ka ọ dị na mbụ, iji ọtụtụ mpempe akwụkwọ, kapeeti, afụ afụ, ihe ọ bụla ịchọrọ ikpuchi uh ma kpuchido igwe kwụ otu ebe gị, ọ dịkwa mma ị kpuchie draịntin site na agbụ ahụ ma mmanụ na unyi ga-abanye n'ụgbọala gị ọzọ. dịkwa mma iji tụọ okpokolo agba n’elu ibe ya.
Naanị iji ọtụtụ padding n'etiti na ha ekwesịghị imebi ha Ha dị mfe. Ma ọ bụrụ na ị nwere obi ụtọ ịnwe ụgbọ ala na-adabaghị adaba mgbe ụfọdụ ị nwere ike ịme ya ka ọ daba, mana ịnwere ike iwepu akụkụ ndị ọzọ dịka oche oche, pedal, na oge ụfọdụ ọbụlagodi ị na-atụgharị aka na gburugburu 'Enwere m olileanya na ị chọtara isiokwu a bara uru. Ma ọ bụrụ otu a, biko nye ya mkpịsị aka ukwu ma soro ndị enyi gị kerịta.
caffeine na ọrịa shuga
Na ịhụ ihe igwe kwụ otu ebe na pịa pịa ebe a. Mee ka anyị mata na ngalaba kwuru ma ọ bụrụ na ị nwere ndụmọdụ ma ọ bụ Ndụmọdụ ma ọ bụ mbanye anataghị ikike mgbe ị na-atụgharị igwe kwụ otu ebe na azụ nke ụgbọ ala.
Ọ bụ iwu na-akwadoghị ịnya ụgbọ ịnyịnya ígwè?
Ọ bụrụ na gịigwe kwụ otu ebena-egbochi echiche nke akara akwụkwọ ikike gị, ọ nwere ike ịbụn'uzo na ezighi ezi, dabere na steeti gị. Ọ bụ ezie na ụfọdụ steeti nwere nnwere onwe na-enye ohereigwe kwụ otu ebeka ekpuchighị akara akwụkwọ ikike ahụ, ọtụtụ steeti anaghị ekwe ka egbochie ya.
Kedu ka m ga-esi họta igwe kwụ otu ebe maka ụgbọ ala m?
Ndị ọzọCar ogbeAtụmatụ
Gbaa mbọ hụị maraoke kacha ekwe ka ụlọ elu ahụ nwee ike ijikwa. Ọ bụrụ na ị wụnye ụgbọ mmiriugwu, nyochaaụgbọ gịikike ịdọrọ. Ọ bụrụgịnwee nkpuchi, gbaa mbọ hụ na elu ụlọ ọ bụlarack ịwụnye ga-enye zuru ezu nwechapụ maka n'azụ onu imeghe n'ụzọ zuru ezu.
Nwere ike ịnyịnya ígwè ọ bụla dabara n'ụgbọ ala ọ bụla?
Dị ka gịnwere ikelee, ọ dị mfearịọnụ igwe kwụ otu ebena ọ fọrọ nke ntaụgbọ ala ọ bụla, gwongworo, ma ọ bụ SUV. Yabụnwere ike ịnyịnya ígwègabaụgbọ ala ọ bụla? Ọfọn, ịkwesịrị ịzụta ụdị dị mma ma soro ntuziaka ndị nrụpụta iji hụkakwesịrị ekwesịdabara, na azịza ya bụ - ee!Ọnwa Ise 25, 2019
Enwere m ike itinye igwe kwụ otu ebe n'ụgbọ ala m?
Hitch tinyegoroigwe kwụ otu ebena-ewere ọtụtụ dị ka ụzọ kachasị mma isi ebuanyịnya igweiri aụgbọ ala. Ha siri ike, nwee ntụkwasị obi, dị mfe iji buru ibu, ma nwee ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na-emebi emebiugbo ala. The catch bụ na ị chọrọ ka a erite hitch arụnyere na gịugbo ala(ozo, anyiwụnyendị a).Abụọ 2, 2020
Ọ Dị Mma maka igwe kwụ otu ebe iji kpuchie akwụkwọ ikike?
Dabere na ụdị nke ikedoogben'ọrụ na ma ọ bụ kwajuru, naogbenwere ike igbochi echiche nkeakwụkwọ ikike. Ikpuchi iheeferenwere ike imebi iwu steeti gị. Nzube nke iwu a bụ iji hụ na ndị uwe ojii nwere ike ịchọpụta ụgbọ ala mgbe niile site n'aka haakwụkwọ ikike.
Nwere ike itinye igwe kwụ otu ebe n'ụgbọ ala ọ bụla?
Dị kaị nwere ikelee,ọ bụmfeugwukaigwe kwụ otu ebena ọ fọrọ nke ntaụgbọ ala ọ bụla, gwongworo, ma ọ bụ SUV. Yabụnwere ike ịnyịnya ígwègabaụgbọ ala ọ bụla? Ọfọn,gịnaanị mkpa ịzụta ụdị dị mma ma soro ntuziaka nke onye nrụpụta iji hụ na ọ dabara adaba, mgbe ahụ azịza ya bụ - ee!Ọnwa Ise 25, 2019
Gịnị mere ogbe ndị e ji agba ịnyịnya ígwè ji dị oke ọnụ?
Onye ọ bụlaigwe kwụ otu ebena-echebe onwe ha. Mụbara mgbagwoju anya na iberibe chọrọ iwu a ịke nkeogbena-eweta ụgwọ ọrụ mmepụta nke ukwuu. Dị nyiwerackskariaya mere.Jun 16, 2017
Enwere ike izu ohi igwe kwụ otu ebe?
Ọ dịghị ihe bụ ihe ohi maka onye ohi siri ike. Nke kachasị mmanwere ike imena-eme ka o sie ikeizu ohikarịa ihe yiri ya nso nke gị. Ọ bụrụ na gịogbena-hitch n'ịnyịnya obere cable looped site yinye eyelet ma ọ bụ a ikedo pin mkpọchi kwesịrị ezu. Aakpatin'ịnyịnyaogbe nwere ikechebe na usoro yiri ya.Eprel 8, 2018
Kedu ka nchekwa nchekwa igwe kwụ otu ebe dị?
Ee, ị nwere ike ime ya n'ụzọ na-ezighi ezi ma nwee aigwe kwụ otu ebedapụ. Naanị echekwala na-ekwesịghị ekwesị Ọ ga-akara m mma ịzụtaogbema nwee ya ruo mgbe ebighi ebi, karịa iji otu ego na-akwagharị ha otu oge wee nwee nsogbu ịkwaga ha. Kasị ogwerackssiri ike iji ugwu mee iheanyịnya igwe, karịsịa nkwusioru zuru oke.
Kedu ụdị igwe kwụ otu ebe dị m mkpa maka ụgbọ ala m?
Thule hitch igwe kwụ otu ebe dị mfe iji wụnye ma jiri ya mee ihe iji buru 1 igwe 5. Ha na-arịgo na onye na-anabata ihe ka ọ nweghị isi akwa dị mkpa. Ogwe igwe kwụ otu ebe nke Thule nwere ike izu oke maka ibugharị igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ karịa na azụ nke ụgbọ ala gị - ọkachasị ma ọ bụrụ na ụgbọ ala gị enweghị ihe mgbochi ma ọ bụ ihe mgbochi.
Kedu ụdị igwe kwụ otu ebe na Hertz nwere?
Hertz na-enye ngwaahịa maka onye ahịa nwere ụdị ndụ ọ na-arụ. Nke a gụnyere igwe kwụ otu ebe. Ejiri igwe kwụ otu ebe, nke nwere ike ibugharị anyịnya igwe abụọ ruo anọ, maka ụgbọ ala nwere ebe ana - adọkpụ ụgbọala na - adọkpụ. A na-etinye ya na bọl na-adọkpụ nke ụgbọ ala ahụ na ịdị elu dị ala na-eme ka ọ dị mfe itinye igwe kwụ otu ebe.
Enwere ike ịdọnye igwe kwụ otu ebe Thule n'ụgbọ ala?
Iji igwe kwụ otu ebe maka ụgbọ ala site na Thule, ị ga-enwe ike ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ ndị dị anya ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe dị anya site n'ụlọ site n'okirikiri ọhịa. Legbọ ala ịnyịnya ígwè Thule na-abịa n'ụdị dị iche iche ma nwee ike ịdokwasị n'elu ụlọ gị, ụgbọ mmiri, towbar, ma ọ bụ na akpati gị.